‘सन्तोष पन्त–विक्की’ वि’वा’द बारे के भन्छन् कलाकार दिपक- दिपा ?:: Mero Desh
‘सन्तोष पन्त–विक्की’ वि’वा’द बारे के भन्छन् कलाकार दिपक- दिपा ?
Published on: १६ भाद्र २०७८, बुधबार १४:२२
गत शनिबार प्रशारण भएको ‘कमेडी च्याम्पियन २’मा प्रतिस्पर्धी विक्की अग्रवालले ‘पेन्टोमाइम’ अभिनय गरे । नबोली गरिने यो अभिनयले सामाजिक संजालमा खुबै प्रशंसा पायो । तर, यो शोका निर्णायक मध्येका एक सन्तोष पन्तले भने विक्कीले नयाँ गरेपनि दर्शक नहाँसेको भन्दै माटो र देश
सुहाउँदो प्रस्तुति पस्कन आवश्यक रहेको भन्दै टिप्पणी गरे यो बिषयले निक्कै ठूलो वि’वाद खडा गर्यो । धेरैले विक्की को प्रस्तुति निर्णायकक कुर्सीमा बसेर पनि सन्तोष पन्तले नवुझेको भन्दै आ’लोच’ना गरे । कतिपयले भने सन्तोषको बचाउ समेत गरे ।
यो पनि,, १६ भदौ , कोपगहेगन । बागलुङ मूल घर भएकी सपना खड्का डेनमार्क आएको पाँच वर्ष मात्रै भयो । फरक देश , फरक भाषा र यहाँको रहनसहनमा घुलमिल हुन मात्रै पनि जोकोहीलाई वर्षौ लाग्ने गर्छ। तर आफ्नो मेहनत, परिश्रमले उनले ठूलो फड्को मारिन्। सपनाले डेनमार्कका सडकमा सार्वजनिक बस हाक्न सफल भएकी छिन्।
डेनमार्कमा सार्वजनिक यातायातमा एक सम्मानित पेसाको रुपमा लिइने ‘बस चालक’ को रुपमा उनले आफूलाई उभ्याउन सफल भएकी हुन्।डेनमार्कमा बस चालक बन्न त्यति सजिलो छैन। सबैभन्दा ठूलो बाध क भाषा बन्दै आएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरे पश्चात् डेनमार्कको स्थानीय डेनिस भाषामा पोख्त भएर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ।
त्यसपछि मात्र ठूलो गाडी अर्थात् बसको अनुमति पत्र लिनको लागि त्यस सम्बन्धी कोर्स गर्न योग्य हुन्छ।डेनिस भाषा सिकी, भाषा परीक्षा पनि उत्तीर्ण भैसकेपछि बस चालक अनुमति पत्रको कोर्स उत्तीर्ण गरेर स्थानीय सडक हरुमा बस चलाउन सक्षम भएपछि मात्र बस चलाउने अनुमति पत्र प्राप्त हुन्छ। यी सबै खुड्किला पार गर्दै सपना डेनमार्कको नेपाली समुदायमा पहिलो नेपाली महिला बस चालक बन्न सफल भइन्।
डेनमार्क आएपछि अरू सामान्य कामहरू गर्दै गर्दा अलि दक्षता भएको काम गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताइन् । ‘डेनमार्क आएको दुई वर्ष पुग्दा मलाई अलि स्थिर तथा दक्ष काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। त्यसैले यहाँको भाषा सिक्न स्थानीय भाषा स्कुलमा भर्ना भए। भाषाको योग्यता पुगेपछि बस चालक बन्ने रहर जागेको थिय,’ सपनाले आफूले देखेको सपना सुनाइन्।
डेनमार्कमा आफ्नो परिवार श्रीमान्, एक छोरी र एक छोरा सँगै बस्दै आएकी खड्काको सफलताम आफ्नो परिवार को ठूलो योगदान रहेको उनले बताइन् । श्रीमान् मोहन खड्काले आफ्नो लागि धेरै सहयोग र अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ ।सपनाको सफलतामा श्रीमान मोहन खुशी मात्र हैन दंग पनि छन्।
‘आधारभूत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण मात्र हुन सकियो भने दक्ष काम पाउन अति सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले उनलाई सधैं भाषा सिक्न प्रेरेणा दिइरहे,’ उनले भने।श्रीमानको साथ र समर्थनले नै आफू बस चालक बन्न सफल भएको सपनाले बताउँछिन् । ‘विदेशको ठाउँ सा ना बच्चाहरू छन्। फेरि मिलेर काम गर्नुपर्ने । बच्चाहरुलाई यथेष्ट समय पनि दिनुपर्ने
यो अवस्थामा मेरो श्रीमान ले प्रोत्साहन र समय दुवै दिनु भयो। त्यसैले म आज सफल भएँ,’ उनले भनिन्।डेनमार्क का रहेका नेपाली महिलाहरुलाई यहाँको भाषा सिक्नमा जोडदिनुपर्ने सपनाको सुझाव छ। ‘पहिला यहाँको स्थानीय भाषामा जोड दिनुहोस्। त्यसपछि आफूले चाहेको हरेक क्षेत्रमा कोर्स गर्न जान पाइन्छ ।
नेपाली महिलाहरूले आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन।भाषा भएमामा हरेक क्षेत्रमा बोल्न ड’राउनु पनि पर्दैन,’ सपनाले बताइन् ।डेनमार्क आएको छोटो अवधिमा यहाँको स्थानीय डेनिस भाषा सिकेर , दक्ष जनशक्तिको लागि चाहिने अध्ययन गरी कडा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु बागलुङकी सपना खड्काको लागि एक ‘सपना’ नै थियो । तर आज पूरा भएको छ । उनको लगाब तथा मेहनत प्रवासमा रहेका सबै नेपालीहरुका लागि प्रेरेणा बनेको छ।
१३ करोड रजस्व छलेर भाग्न लागेका क्यासिनो सन्चालक मन्त्री आलेको निर्देशनमा एयरपोर्टमै प’क्रा’उ
भाडामा बस्नेलाइ बढी महसुल लिनेको घरमा लाइन का’टिने
बढ्दो ओ’मिक्रोन सं’क्रमणका कारण विश्वभर करीब ६ हजार हवाई उडान रद्द
सात वर्षभित्र रुकुमलाई गरिबी र बेरोजगारमुक्त जिल्ला बनाउने अर्थमन्त्री शर्माको उद्घोष
सर्बसाध्रणको पैसा सस्तोमा किनेर महँगोमा बेचेर नाफा खाने काम मात्र होइन बैंकको : जनार्दन शर्मा
अब भारतबाट आयात हाेइन, नेपालमै उद्याेग खाेलेर बा,हिर नि,र्यात गर्नुपर्छ -जनार्दन शर्मा